गैँडाकोट, १७ असार । विजय सामुदायिक शिक्षा सदन गैँडाकोटमा बिहीबार लागुपदार्थ दुव्र्यसनविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । रुपान्तरण र युवा प्रा.लि., नवलपुरले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । आयोजक संस्थाका अध्यक्ष ईश्वर गैरे र जिएस सुवेदीले कार्यक्रममा सहजीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा कक्षा आठ, नौ र दसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु सहभागी थिए । उनीहरुलाई लागुपदार्थ दुव्र्यसन भनेको के हो ? मानिस कसरी यसमा फस्छ ? यसबाट कसरी बच्ने ? भन्ने विषयमा जानकारी...
काठमाडौं, १७ असार । निर्वाचन आयोगले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरेको छ । केही दिनअघि लामिछानेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दल दर्ताका लागि निवेदन दिइएको थियो । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर लामिछानेले आफ्नो पार्टी निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै नाममा दर्ता भएको जानकारी गराए । त्यस्तै चुनाव चिन्ह गोलाकारभित्र घन्टी पाएको बताए । राजनीतिक दलको नाममा स्वतन्त्र शब्द राख्न नपाइने भन्दै कतिपयले निर्वाचन आयोगमा उजुरी समेत दिएका थिए...
विराटनगर, १७ असार । आफ्नै स्कुल बसले ठक्कर दिएर मोरङका दुई बालबालिकाको ज्यान गएको छ। स्कुल छुट्टी भएर घर फर्कन ठिक्क परेका बेला मोरङको रंगेली ७ मा रहेको माउन्ट मकालु बोर्डिङ स्कुलको बसले मंगलबार ठक्कर दिँदा दुई विद्यार्थीको मृत्यु भएको हो।स्कुल छुट्टी भएपछि विद्यार्थीहरु बाहिर निस्कने क्रममा को १ क ११३० नम्बरको बस अनियन्त्रित भएर किच्दा रंगेली–७ का महादेव मण्डलका ४ वर्षिय छोरा हृतिक मण्डल र रंगेली–६ चोप्राहाका स्थानीय नरेश...
एजेन्सी/भारतको मणिपुरको नोनी जिल्लामा एक निर्माणाधीन रेलवे साइटको भग्नावशेषमा पुरिएर चौध व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने अन्य थुप्रै फसेको आशंका गरिएको छ। भग्नावशेषबाट २३ जनालाई निकालिएको छ, जसमा १४ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसैगरी अन्यको खोजी जारी छ। कति पुरिएका छन् भन्ने यकिन भएको छैन तर हालसम्म गाउँले, सेना र रेलवे कर्मचारी, मजदुरसहित ६० जनाको मृत्यु भएको हुनसक्ने बताएका छन् । रातभर खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेको र घटनास्थलमा सघाउन...
गैँडाकोट, १७ असार । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को मध्यविन्दु नगरपालिका–१२ बेल्हानीमा करेन्ट लागेर ५८ वर्षका उजि कुमालको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले दिएको जानकारी अनुसार, गएराति घरको छत सफा गर्ने क्रममा बिजुलीको तारमा छुन गई करेन्ट लागेका कुमालको उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । घाइते कुमाललाई उपचारको लागि मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पताल डण्डा लगिएको थियो । उपचारको क्रममा राति १० बजे कुमालको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी...
गैँडाकोट, १७ असार । नारायणी नदीको पुलबाट हाम फालेका एक पुरुष बेपत्ता भएका छन्। शुक्रबार विहान उनले हाम फालेको इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटका प्रहरी निरीक्षक प्रशान्त श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पुलमा उनले लगाउने कोट र चप्पल भेटिएको थियो । ती व्यक्ति भरतपुरका हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ । घटनाबारे अनुसन्धान र बेपत्ता व्यक्तिको खोजी कार्य चलिरहेको प्रहरी निरीक्षक श्रेष्ठले बताउनुभयो । ...
काठमाडौँ, १७ असार । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र महानायक राजेश हमालबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रचण्डलाई भेट्न हमाल आज बिहान खुमलटारस्थित निवास पुगेका थिए । चलचित्र विकास बोर्डको रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दरखास्त आह्वान गरेपछि आकांक्षीहरु शक्ति केन्द्र धाइरहेको बेला भएको यो भेटलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । तर भेटघाटको समन्वय गरेका संगीतकार चेतन सापकोटाका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्ड र हमालबीच समसामयिक देशको राजनीति, श्रीलङ्काको...
गैँडाकोट, १६ असार । गैँडाकोट–६ का दिनुराम सापकोटाको घरमा विहीबार दिउँसो चोरी भएको छ । घरमा कोहि नभएको मौकामा चोरले ढोका फोरेर धनमाल चोरी गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय गैँडाकोटले जानकारी दिएको छ । प्रहरीका अनुसार सापकोटाको दराजमा रहेको नगद तथा गरहगहना चोरी भएको हो । विद्यालयबाट छोरा घर आएपछि चोरी भएको थाहा भएको दिनुराम सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । चोरी गर्ने व्यक्तिको खोजीकार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । ...
गैँडाकोट, १६ असार । गैँडाकोट नगरपालिका प्रमुख मदनभक्त अधिकारीले समृद्ध मुलुकबाट मात्रै मानव अधिकारका विषयहरू सुनिश्चित हुने बताउनु भएको छ । राष्ट्रिय मावन अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रुमुख अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो । राष्ट्रिय मावन अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशले विहीबार नगरपालिकामा पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यन्वयनको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा प्रमुख अधिकारीले मानव अधिकार हनन्का घटना प्रत्यक्ष देखिरहे पनि आर्थिक अभावकै...
गैंडाकोट, १६ असार । खराल वंशोद्धार प्रतिष्ठान नेपाल, गैंडाकोट १४ को सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । गत असार १२ गते आईतबार संस्थाको केन्द्रिय कार्यालय परिसरमा आयोजित एक समारोहका बीच ‘निर्माणाधिन ज्येष्ठ नागरिक भवन स्थलको कम्पाउण्ड वाल निर्माण’ आयोजना सम्बन्धि सुनुवाई गरिएको हो । । कार्यक्रममा संस्थाका महासचिव तथा सो आयोजनाको निर्माण समितिका अध्यक्ष खरालले कुल ११ लाख ६ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँको लागतमा यस आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको...